Cabsi iyo walaac soo food saaray dadka ku nool degmada Kamakunji ee Nairobi… – Hagaag.com
Cabsi iyo walaac soo food saaray dadka ku nool degmada Kamakunji ee Nairobi…
Posted on 21 Seteembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Waxaa walaac xoogan uu soo food saaray shacabka ku dhaqan degmada kamakunji ee magaalada Nairobi ee caasimada Kenya kadib markii ay soo if baxday in la gato ilmaha ku dhasha isbitaalka Pumwani ee ku yaal xaafada Islii.
Barasaabka ismaamulka Nairobi Mr Mike Sonko oo ka hadlay Tv-ga maxaliga ah ee gudaha Kenya ee Citizen ayaa waxaa uu sheegay in ilmo badan horay loogu gatay isbitaalka ayna wado dowladiisa baaritaano lagu hayo dhakhaatiirtii ka danbeysay.
Dhanka kale waxaa uu tilmaamay in haweenka ku umula Isbitaalka Pumwani loo sheego in ay meyd ahaan cunuga ay u dhaleen iyada oo la tusayo ilmo horay u dhintay oo yaal isbitaalka.
Arintaan ayaa waxaa uu sheegay in marqaati ay ka tahay 12 caruur ah oo laga helay maalmo ka hor iyaga oo ku jira Kartoon kuwaasi oo horay u dhintay lana tuso haweenka Umula si ay ugu qancaan.
Dhanka kale afhayeenka golaha aqalka sare ee Kenya Ken Lusaka ayaa amray in si deg deg ah loo sameeyo baaritaanada la xiriira arinta ku aadan in ilmaha lagu kala gato isbitaalka Pumwani ee ku yaal degmada Kamakunji ee xaafada Islii.